Ingxoxo noMarwan | Izincwadi Zamanje
UCarmen Guillen | | Izingxoxo, Abalobi, Literatura, Izinkondlo
En Izincwadi Zamanje Sibe nentokozo enkulu ngokukwazi ukufeza lokhu ingxoxo noMarwan, obenobungani futhi evulekile ngaso sonke isikhathi selokhu sixhumane naye. Kusasa incwadi yakhe entsha iyaqhubeka nokudayiswa "Lonke ikusasa lami likuwe" kusuka endlini yokushicilela yasePlaneta, futhi isihloko sayo sesivele siyathembisa ... Sikushiya nezimpendulo zakho zemibuzo yethu.
Izindaba Zokubhala: Siyalazi igama lakho, Marwan; Siyazi ukuthi uzinikele emculweni nasekubhaleni, ngakho-ke singasho ngokujwayelekile ukuthi ungumculi, kepha uMarwan uzichaza kanjani?
UMarwan: Ukuchaza ngokwakho akunakwenzeka ngoba abantu banezici eziningi, kepha hheyi, incazelo yami yile: Ngizama ukuba ngumuntu olungile.
KUYA KU: Siyazi ukuthi kuze kube manje useshicilele izincwadi ezimbili, "Indaba edabukisayo ngomzimba wakho ngaphezu kweyami" ngo-2011 futhi "Amanothi ngesikhathi sami ebusika" ngo-2014. Kusasa entsha yakhe incwadi "Wonke ikusasa lami unawe." Yini esingayithola ehlukile kule ncwadi uma iqhathaniswa nalezi ezimbili ezedlule?
MW: Into yokuqala ukuthi ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ngibhala kangcono. Ngingumfundi omusha ekubhaleni izincwadi futhi eyokuqala ayinangqondo kakhulu kunalena. Vele kunjalo, futhi i-visceral ethe xaxa futhi inezingxenye zayo ezinhle. Kule ncwadi engiyishicilela manje senginakekele isigqi, ukwahlukaniswa kwamavesi, ngibhala ngezihloko ezahlukahlukene, kuningi izinkondlo zothando nezenhliziyo ebuhlungu njengakuqala kodwa kukhona nezinkondlo eziningi zenhlalo , iyinkomba ethe xaxa, iyincwadi ethe xaxa futhi ngaphandle kwayo inama-aphorism amaningi noma izinkondlo ezincane, into eyayingakaze ibe nayo encwadini eyedlule.
KUYA KU: Uchitha malini ukubhala nokuqamba nsuku zonke uma ungekho kuhambo? Ngabe unemikhuba ethile ekhethekile noma izinto zokuzilibazisa okudingeka uzenze ngaphambi kokufika kukho?
MW: Kuya ngokuthi. kwesinye isikhathi usuku lonke kwesinye isikhathi akukho lutho ngesonto. Vele, uma ngigqoka ngiyafaka. Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu ukusetha izinsuku zokugxila futhi lapho ngigxila angiyeki ukubhala. Anginayo imicikilisho yanoma yiluphi uhlobo, ngiyakwazi ukubhala noma kuphi nanoma nini. Amavesi eza uma uwafuna kodwa futhi eza nganoma yisiphi isikhathi nasesimweni.
KUYA KU: Uma ngabe ubunikezwa ukhetho phakathi kokuqhubeka nokuqamba nokucula noma ukuqhubeka nokubhalela ukushicilelwa kwezincwadi, uMarwan ubengakhetha ini?
MW: Qamba bese ucula. Ngicabanga ukuthi wulimi oluphakeme. Kepha woza, lokho ngeke kwenzeke, ngakho-ke ngizoqhubeka ngenze konke, ngoba zombili lezi zinto ziyangijabulisa.
KUYA KU: Ngicabanga ukuthi bake bakuhlobanisa noma bakufanise ngesinye isikhathi emsebenzini wakho no-Ismael Serrano noma uJorge Drexler, ngoba nabo bangababhali bezingoma futhi babhala ngothando nenhliziyo ebuhlungu… Ucabangani ngabo? Ngabe ubalandile ngesikhathi esithile empilweni yakho noma bakumake ngomculo lapho uqamba?
MW: Bobabili bangimake kakhulu endleleni yami yokuqamba. Ngibalalele bobabili iminyaka engaphezu kwengu-15 futhi ngingumlandeli wabo bobabili, ngendlela yabo yokubala nokucula. Kimi ziyizikhombo zami ezimbili eziyinhloko, bekulokhu kunjalo.
KUYA KU: Siyaqhubeka ngomculo wakho, yimaphi amadolobha ozowavakashela maduze? Futhi iyiphi ofuna ukuyicula kodwa ongakakwazi ukuyicula?
MW: Njengamanje ngizoya eSantiago de Compostela bese ngihambela eMexico okuncane esikwehlisile ukuze sikwazi ukubuyela embukisweni wezincwadi waseMadrid, kodwa ngizobuya ngoNovemba. NgoJuni ngizoba seZaragoza, Murcia naseCagagena bese kuthi ngoJulayi ngenze ikhonsathi ebaluleke kakhulu yalolu hambo. Kuzoba seMadrid, emjikelezweni weLos Veranos de la Villa eCirco Price. Ngimema wonke umuntu, kungakhathaliseki idolobha, ukuthi eze, ngoba kuzoba ngumbukiso, lokho kuqinisekile.
KUYA KU: Ngabe unalo uthando olukhethekile ngengoma ethile noma izinkondlo zakho? Futhi ngoba?
MW: Ezingomeni kwabaningi: Izingelosi, "Njengoba ulala eduze kwami", "Ingoma kababa",… Ngithanda zonke izingoma zami kodwa kukhona ezinye ezingishukumisayo ikakhulukazi futhi ezinye zazo. Futhi ezinkondlweni zami ngithanda entsha ebizwa ngokuthi «Ama-Compañeras», olunye ucingo "Igama uMariya", «Qala ukuyichaza»; "Amazwekazi", njll ...
KUYA KU: Yimuphi umlobi noma ababhali ongeke uyeke ukulandela bese unencwadi ngayinye? Uma kungeyona ethile, iyiphi incwadi oyithandayo?
MW: Kuningi. Ngiyazifela ngoJuan José Millás, sengifunde izincwadi zakhe eziningi. Futhi uQuim Monzó, u-Alssandro Baricco, uBenjamín Prado, uLuis García Montero, uKarmelo C. Iribarren, uMurakami, uBukowski,… Ngifunde izincwadi eziningi ngalowo nalowo wababhali. Incwadi yami engiyithandayo ngicabanga ukuthi "Inkululeko" nguJonathan Franzen, noma kunjalo «Ulwandle lwase-Ocean» Ngangimthanda noBaricco.
KUYA KU: Ekugcineni, iMarwan, indawo ongathandana nayo, indawo yokuzilahlekisela wedwa futhi enye ongayithola ngobuhle bayo obuthile.
MW: Ukuthandana, noma iyiphi indawo yinhle. Kepha uma ungibuza ngendawo engenza ngithandane, ngicabanga ukuthi impendulo nguFormentera. Indawo engcono kakhulu yokulahleka yiMadrid futhi ngenxa yobuhle bayo into ebabazekayo engiyibonile inguzunga yeqhwa iPerito Moreno e-Argentina.
Ngibonga kakhulu uMarwan ngamagama akho ngamanye avezwe lapha nalapha Izincwadi Zamanje Sikufisela inhlanhla kukho konke okwenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » Ingxoxo noMarwan
Ubani kwifilimu ethi 'Suicide Squad'